Ngaphandle Kokulandelwa Kwezingcingo, Umnikelo Wakho Womkhankaso Ukhula Ngokunembile | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Sineklayenti lebhizinisi elineminyango eminingana kwezokumaketha… ubudlelwano bomphakathi, imidiya yendabuko, ukwenziwa kwezinjini zokusesha, ukumaketha kwamaselula, ukuthuthukiswa kokuqukethwe nokuningi. Ngonyaka odlule, siyazi ukuthi ithrafikhi nokuguqulwa kwe-SEO nokuqukethwe kuphindwe kabili ngoba analytics ihlanganiswe kahle kuyo yonke indawo.
Kunenkinga enkulu, noma kunjalo. Umnyango wabo wezokumaketha usebenzisa inombolo yocingo efanayo kuyo yonke imikhankaso kungakhathalekile ukuthi iphakathi nendawo. Umphumela uba ukuthi noma ngubani ongena enkampanini kubhekiswe kuye ngokuzenzakalela kwabezindaba bendabuko. Ngenkathi kungangabazeki ukuthi imidiya yendabuko ishayela izingcingo, iklayenti likala umthelela walo futhi libukela phansi umthelela abezindaba be-digital abanawo ngoba ukulandelela ikholi.
Kuyini Ukulandelwa Kwezingcingo?
Iningi lamabhizinisi aphakathi nendawo kuya kwelikhulu linezinhlelo zefoni ezivumela izingcingo eziningi ukuthi zidluliselwe ngokukhalipha ngaphakathi enkampanini. Amapulatifomu akhona manje lapho ungalandelela ngokunembile khona umthombo womkhankaso wekholi ngokushintsha inombolo yocingo yomkhankaso ngamunye. Ucezu lweposi oluqondile lungaba nenombolo eyodwa yocingo, iwebhusayithi enye inombolo yocingo, ezentengiselwano zethelevishini enye enye inombolo yocingo.
Kukhona izinsizakalo ezivumela izinkampani ukuthi zengeze izinombolo zefoni eziqondene nemikhankaso futhi zizisebenzise ukulandelela izingcingo ngokunembile. Lezi zingxenyekazi ziguqukile futhi zinganikeza ukunemba okuthe xaxa - ukushintsha ngamandla inombolo yocingo esizeni sakho ngokususelwa kumthombo wokudlulisela ukuze ukwazi ukulandelela imikhankaso yokusesha, yezenhlalo, ye-imeyili neminye. Leyo sevisi ibizwa ukulandelela ikholi (Okuningi: incazelo yevidiyo yokulandelelwa kwezingcingo).
Kungani Usebenzisa Ukulandelwa Kwezingcingo?
With ama-smartphones angaphezu kwezigidigidi ezi-2 isetshenziswa umhlaba wonke, uhambo lwamakhasimende luya ngokuya luyinkimbinkimbi, nabantu beshintsha phakathi kweselula, ideskithophu, ukuchofoza nezingcingo. Ubuchwepheshe buyaqhubeka nokuhlanganisa iwebhu neselula, futhi. Amadivayisi amaningi akhomba izinombolo zefoni ngokuzenzakalela kuzinhlelo zokusebenza neziphequluli futhi ungamane uchofoze ukuzibiza. Futhi, ungakwazi Isixhumanisi inombolo yocingo ngaphakathi komongo wesiza. I-iPhone ikhiphe ukusebenza okwelula i-smartphone yakho kudeskithophu yakho ngaphandle komthungo ukuze ukwazi ukusebenzisa ikhompyutha yakho ukushaya izingcingo.
The ishaneli yezingcingo ezingenayo ikhula ngokushesha, kepha abathengisi abanaso isithombe esicacile yimiphi imikhankaso eqhuba ukuhola kwekhwalithi ephezulu. Ukungabi nayo idatha yokuxhuma ukuxhumana okuhlukahlukene oku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, okufana namakholi, kungabiza izinkampani izigidi ngamathuba wemali ephuthelwe. Lokhu infographic kusuka I-Invoca inikeza isendlalelo sokuthi kungani abathengisi bedinga ukucabanga ngemininingwane yabo yezentengiso ngokuya ngezingcingo zombili KANYE nokuchofoza.
An i-ebook ehambisana nayo inikeza iseluleko esisebenzayo mayelana nokuthi abathengisi bangangeza kanjani ubuhlakani bezingcingo kusethi yabo yamathuluzi, benza izingcingo ezinjengezokuchofoza ukushayela imikhondo ephezulu kakhulu.
Emhlabeni ohambile, i-Invoca inikeza ukuhlakanipha kwezingcingo efwini lokumaketha ukusiza abathengisi ukushayela izingcingo ezingenayo futhi bazenze ukuthengisa. Ipulatifomu le-Invoca liletha ubuhlakani bezingcingo obuningi obudingekayo kubakhangisi ukuze babambe futhi basebenzise kahle ukubandakanyeka kwamakhasimende nokuthengisa ngaphezu kokuchofoza. Kusuka kokunikezwayo kuya enhlosweni, abathengisi bathola ukuqonda okuphelele kohambo lwekhasimende ngaphesheya kwamaphoyinti okuthinta edijithali, amaselula nokungaxhunyiwe ku-inthanethi ukuze bakwazi ukusebenzisa imali yabo yokuthengisa, bashayele izingcingo ezisezingeni eliphakeme futhi bahambise umuzwa ongcono wamakhasimende.
Tags: isenzoukulandelela ikholiinfographicukuhlaselainombolo yocingoukulandela ifoni
Dec 30, 2014 ku-4: 59 AM
I-athikili enhle! Ngivumelana ngokuphelele nawe ukuthi ukulandelela izingcingo kunomthelela omkhulu futhi kusiza amabhizinisi ukuthi ahlole ukusebenza komkhankaso wawo ngamunye wokukhangisa ngesikhathi sangempela futhi ngiwavumele enze izinqumo ezisheshayo nezanele nokulungiswa ukuze akhulise i-ROI.
Siyabonga ngendatshana enhle!
Dec 31, 2014 ngo-6: 10 PM
Uyabheja! Wazise amazwi anomusa.